Voambolana 10 isan'andro no ezahiny ho fehezina amin'izany ary efa mahay manisa tsara 1 hatramin'ny 10 ny lehilahy ankehitriny araka ny nambarany. Nanentana ny rehetra ho tia hamaky boky betsaka izy ho fanovozana fahalalana amin’izao fijanonana an-trano izao. Nanentana ny rehetra hanaraka ny fepetra napatraky ny fanjakana koa izy amin'ny ady atao amin'ny fianaky ny coronavirus izao. Nampatsiahy ny coach Dupuis fa matoa ny ekipam-pirenena tonga amina dingana avo nandritra ny CAN dia nisy fifehezan-tena lehibe sy fanajana ny “discipline” tao; tokony tahaka izany no hiatrehan’ny tsirairay ity valan’aretina ity hoy izy raha tiantsika ny handresy azy.